Ny ceftiofur dia cephalosporin? - BALLYA
Posted on March 31, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona ny ceftiofur?
Ny voka-dratsin'ny Ceftiofur
Ceftifur fotsy vovoka mavo mavo. Tsy mety levona anaty rano izy io, tsy mora vaky anaty acétone ary saika tsy vonoina amin'ny etanol. Ceftiofur dia cephalosporin-biby voafaritra fahatelo an'ny synthetic.
Cephalosporin ny fanafody famonoana bakteria dia fanafody mahomby amin'ny fitsaboana ny biby, ary ankehitriny dia ampiasaina bebe kokoa amin'ny fiompiana sy ny fiompiana akoho amam-borona. Raha ny fahitana ny firafitry ny molekiola zava-mahadomelina, ny molekiola cephalosporin rehetra dia misy ny firafitry ny cephem, ka an'ny beta lactam antibiotika, izay asidra 7-aminocephalosporan (7-ACA) ao beta lactam antibiotika, noho izany dia manana mekanisma fanamorana izy ireo.
Avy amin'ny fomba fijerin'ny mekanisma hetsika miady amin'ny bakteria, io karazana fanafody fanoherana bakteria io dia afaka manimba ny rindrin'ny bakteria ary mampiseho ny vokatry ny bakteria mahery indrindra mandritra ny fotoana fiterahana. Misy vokany mahery amin'ny fisafidianana bakteria io, saingy saika tsy misy poizina amin'ny vatan'ny biby; ary manana ny tombony azo avy amin'ny fiparitahan'ny bakteria midadasika, ny vokatry ny bakteria mahery, ny fanoherana ny penicillinase ary ny fihenan'ny alika kely kokoa noho ny penisilinina. Noho izany, izy ireo dia karazana antibiotika manan-danja miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta, poizina ambany ary fampiharana ara-pahasalamana malalaka.
Tarana fahatelo izany cephalosporins ho an'ny biby manana fiasa mahery vaika mahery vaika, maro karazana bakteria. Misy vokany mahery amin'ny bakteria Gram-négatif toa ny Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella multocida, ary Actinobacillus pleuropneumoniae, sns. ny vokatra manohitra ny bakteria miabo gram-posité dia malemy kokoa noho ny an'ny taranaka voalohany.
Ity vokatra ity dia tsy tototry ny fitantanana am-bava. Mora entin'ny tsindrona intramuscular sy subcutaneales haingana izy io, ary miparitaka be. Ny fifantohana ra mahomby dia voatazona mandritra ny fotoana maharitra. Izy io dia nanjary metabolika lasa lasa deoxyfuroyl ceftiofur, ary avy eo namboarina ho vokatra ronono tsy velona. Ny ankamaroan'izy ireo dia esorina amin'ny fisotrony sy ny diky ao anatin'ny 24 ora aorian'ny fampidirana intramuscular.
Raha ampitahaina amin'ireo taranaka roa teo aloha dia ny taranaka fahatelo cephalosporins nampihena ny hetsika fanoherana ny G + cocci, ny fitomboan'ny fitoniana amin'ny lactamase G-bacillus, ary ny effets anti-G-bacillus mahomby, izay tsara lavitra noho ny taranaka voalohany sy faharoa; ny fiparitahan'ny bakteria dia nanitatra be tokoa, ary nitombo ny fiantraikan'ny bakteria amin'ny bakteria anaerobika sy Pseudomonas aeruginosa. Ny cephalosporins amin'ny andiany fahatelo dia mety hahatratra tavy samihafa, lavaka synovial ary tsiranoka amin'ny vatana, ary afaka mahatratra mivantana ny tsiranoka cerebrospinalin'ny marary voan'ny meningeal; tsy misy nephrotoxicity. Ny zava-mahadomelina solontena dia ahitana ceftiofur.
Ny cephalosporins an'ny taranaka fahatelo no cephalosporins be mpampiasa indrindra any amin'ny hopitaly. Mizara roa izy ireo araka ny toetrany amin'ny famonoana bacilli gram-négatif. Ny karazana iray dia mamono ny bakteria Enterobacteriaceae indrindra toy ny Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, ary koa misy fiantraikany amin'ny famonoana bakteria Gram-positive. Ampiasaina matetika ny ceftriaxone sy ceftiofur, sns. ny iray kosa dia ny famonoana an'i Pseudomonas aeruginosa, ary koa ny bacilli gram-négatif hafa.
Ity vokatra ity dia voadona haingana aorian'ny tsindrona intramuscular sy subcutaneous, miaraka amin'ny fifantohana zava-mahadomelina be amin'ny rà sy ny sela, ary ny fifantohana zava-mahadomelina mahomby dia voatazona mandritra ny fotoana lava, miadana ny fanafoanana ary lava ny antsasaky ny fiainana. Aorian'ny tsindrona intramuskular amin'ny omby sy kisoa, dia entina haingana ao anatin'ny 15min izy io ary mamorona metabolite Desfuroyl ceftiofur (DFC) amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny plasma. Koa satria tsy simba ny peratra lactam, ny fiasan'ny bakteria dia mifanaraka amin'ny an'ny Ceftiofur. Ny DFC dia afaka mamorona difluid cystine DFC tsy miasa intsony ao amin'ny sela. Ny habetsaky ny fizarana an'io vokatra ≤ 1L / KG io. Ny kisoa, ny ondry ary ny omby dia manana fifantohana avo indrindra amin'ny voa aorian'ny tsindrona intramuscular amin'ny doka maro, arahan'ny havokavoka, aty, tavy ary hozatra, izay amin'ny ankapobeny dia mitazona fitanana avo kokoa noho ny MIC.
Ohatra, ny kisoa dia atsindrona intramuscularly amin'ny 3 mg / kg indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro. Ny fifantohana amin'ny sela dia: plasma 3.25, lalan-pisefoana 0.60, hoditra 0.57, havokavoka 0.49, tonsil 0.30, ary fluide iraisana 0.29. Ny omby dia nampidirina intramuscularly tamin'ny 1 mg / kg, indray andro isan'andro mandritra ny 5 andro, ary ny fifangaroan'ny sela dia 1.0 plasma (7.5H aorian'ny tsindrona), 0.65 tsiranoka iraisana (2.5H aorian'ny tsindrona), havokavoka 0.36, ary jejunum 0.34. Izy io dia miseho indrindra amin'ny famoronana ny disulfide cystine metabolite-DFC maimaimpoana amin'ny ronono. Cefoxifur dia avoaka miadana, ary ny antsasaky ny ain'ny biby dia samy hafa be (T1 / 2 ho an'ny soavaly, omby, ondry, kisoa, alika, akoho turkey) dia 3.15, 7.12, 2.83, 14.5, 4.12, 6.77 ary 7.45H . Fa ny ankamaroan'izy ireo dia azo esorina amin'ny mony sy ny diky ao anatin'ny 24 ora aorian'ny tsindrona intramuscular. Ny DFC dia mihombo haingana amin'ny fitambarana tsy miasa ao amin'ny fako omby, kisoa ary akoho.
Izy io dia ampiasaina amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny urinary vokatry ny bakteria saro-pady, toy ny tazo fitateram-bovine sy ny pnemonia, ny fivalanana mavo, ny actinobacillus haemophilus miteraka porcine pleuropneumonia, ny otrikaretina taovam-pisefoana nateraky ny streptococcus, Escherichia coli ary Proteus mirabilis canine urinary tract infection nataon'i E. coli amin'ny akoho.
Ny pleuropneumonia aretin-kisoa dia areti-mifindra ateraky ny Actinobacillus pleuropneumonia. Izy io dia aretina mifindra kilasy faharoa ary aretina parasito. Aretina taovam-pisefoana lehibe amin'ny kisoa izany. Mihanaka any amin'ireo firenena miompy kisoa ary lasa iray amin'ireo aretina dimy lehibe manerantany amin'ny fiompiana kisoa indostrialy, ka niteraka fatiantoka lehibe teo amin'ny toekarena. Ny pleuropneumonia azo avy amin'ny porcine dia aretina manerantany, izay miparitaka be any amin'ny firenena fiompiana kisoa eran'izao tontolo izao, anisan'izany ny Fanjakana Mitambatra, Alemana, Suisse, Danemarka, Aostralia, Kanada, Mexico, Arzantina, Suède, Polonina, Japon, Etazonia. , ary Sina. Manokana, ny fihanihan'ity aretina ity dia nitombo tao anatin'ny folo taona lasa, ary ekena iraisam-pirenena ho iray amin'ireo aretina lehibe manimba ny indostrian'ny kisoa maoderina.
Ny tazo fitaterana omby dia soritr'aretin'ny fihenjanana, izay ateraky ny aretina amin'ny mikraoba mikraoba isan-karazany. Ny tena mampiavaka azy dia ny tazo mahery sy ny pnemonia anelanelam-baravarana sy ny loaba. Ny biby dia nentina lavitra, niatrika hatsiaka na hafanana, tahotra, fifandraisana akaiky ary fifindran'ny aretina, ka niafara tamin'ny fihenan'ny fanoherana omby omby, tsy fifandanjan'ny vatana, bakteria mety, matetika amin'ny fipoahan'ny bakteria pathogenika, toy ny viriosy mangatsiaka, pasteurella, Mycoplasma, virus syncytial taovam-pisefoana, aretim-pivalanana, aretin'ny tongotra aman-vava, sns. Ny soritr'aretin'ny ombivavy marary dia ny tazo mahery, ny conjunctivitis purulent, ny ranomaso tsy tapaka, ny orona mandohalika, ny kohaka matetika, ny fahasembanana amin'ny fisefoana, ary ny mavo rora. Matetika io omby matavy io dia mora voan'io aretina io, ary izany koa dia iray amin'ireo antony mahatonga ny fahafatesan'ny omby.
Izy io dia misy vokany sterilization mety be. Izy io dia mahomby amin'ny bakteria miabo tsara sy manga. Ny hetsika bakteria dia mahery noho ny ampicillin, ary ny hetsika fanoherana ny streptococcus dia tsara kokoa noho ny an'ny quinolones. Ity vokatra ity dia voadona haingana aorian'ny tsindrona intramuscular, ary ampiasaina indrindra amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana (tazo fitaterana, pnemonia) naterak'i Pasteurella hemolyticus, Pasteurella multocida ary Haemophilus saccharum. Izy io dia mandaitra ihany koa ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny Corynebacterium pyogenes. Izy io koa dia afaka mitsabo ny rotin'ny tongotra ateraky ny Fusobacterium nekrosis sy ny niger Bacteroides.
Izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana (tazo fitaterana, pnemonia) ateraky ny hemolytic Pasteurella, Pasteurella multocida ary Haemophilus saccharomyces. Izy io dia mandaitra ihany koa ho an'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny Corynebacterium pyogenes.
Kisoa: Ampiasaina amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana (pncine bakteria porcine) naterak'i Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Salmonella cholerae ary Streptococcus suis.
Soavaly: ampiasaina indrindra amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana ateraky ny streptococcus veterinary. Izy io koa dia mandaitra amin'ny aretin'ny taovam-pisefoana toy ny Pasteurella, Streptococcus equi, Proteus, Moraxella, sns.
Alika: ampiasaina amin'ny aretin'ny urinary vokatry ny Escherichia coli sy Proteus mirabilis.
Akoho iray andro: mifehy ny colibacillosis mifandraika amin'ny fahafatesan'ny akoho alohan'ny fotoana.
Fanindronana intramuskular: fatra iray isaky ny lanjan'ny vatana 1kg, omby 1.1 ~ 2.2mg, soavaly 2.2 ~ 4.4mg, indray mandeha isan'andro mandritra ny 3 andro.
Fanindronana ambanin'ny tany: indray mandeha isaky ny lanjan'ny vatana 1 kg Alika 2.2 mg indray mandeha isan'andro, fampiasana tsy tapaka mandritra ny 5 ka hatramin'ny 14 andro
Akoho iray andro 0.08 ~ 0.20mg isaky ny vorona (ambanin'ny hoditra)
Fanomanana sy famaritana: Ceftiofur Hydrochloride Suspension Injection 100ml: 5g
Fihetseham-po amin'ny alikaola, indrindra ny eritema sy urticaria, mangidihidy, tazo zava-mahadomelina, indraindray angioedema, asma ary hypostension.
Fihetseham-po amin'ny gastrointestinal toy ny maloiloy, mandoa ary mivalana.
Ny serum alanine aminotransferase dia azo asandratra kely.
Ny tsindrona intramuskular eo an-toerana dia mety miteraka fanaintainana, ary ny tsindrona intravenous dia mety miteraka phlebitis na thrombophlebitis.
Ny fanehoan-kevitra amin'ny rafi-pitabatabana toy ny aretin'andoha, fanina ary fikorontanana amin'ny fahatsapana dia azo jerena.
Ny marary tsy mahazaka antibiotika cephalosporin dia tsy tokony ampiasaina.
2. tsy mifanaraka
Ny cephalosporins dia be mpampiasa amin'ny fampiasana olombelona na an'ny biby, ary misy karazany maro, fa rehefa ampiasaintsika izy ireo dia tokony hitandrina ny fampifanarahan'izy ireo. Ny tsara indrindra dia ny manaraka ny torolàlana omen'ny dokotera momba ny fanafody, ary aza mampiasa azy ireo an-tsokosoko, raha tsy izany dia be ny fatiantoka! Anisan-dry zareo, ceftifur tsy afaka mifanaraka amin'ny dexamethasone, hydrocortisone ary fanafody hafa.
Ceftiofur dia cephalosporin amin'ny andiany fahatelo misy vokarin'ny bakteria amin'ny halaviran-doha.
Dexamethasone dia zava-mahadomelina anti-inflammatoire, anti-toxin, ary adrenal-adrenal glucocorticoid adrenal. Ny Ceftiofur dia manapoizina (misy vondrona imino marobe sy vondrona amide), ary ny dexamethasone dia reductive (misy fatorana etilenika roa). Raha mifangaro izy roa dia hitranga ny fihenan'ny redox na ny fanehoana polymerisation.
Ireto zava-mahadomelina roa ireto dia be mpampiasa amin'ny toeram-pitsaboana biby. Indrindra amin'ny tranga misy ny tazo miaraka amin'ny tazo, tokony handinika bebe kokoa.
Aminoglycoside antibiotika: ny fifangaroana dia misy effets synergistic, fa mitombo kosa ny nephrotoxicity, ary ireo izay tsy miasa renal tsara dia tokony ampiasaina am-pitandremana.
Probenecid: natambatra ampiasaina hampihemorana ny fivoahan'ny cephalosporins ary hampitombo ny fifantohan'ny ra.
Coumarin anticoagulant: atambatra ampiasaina hanatsarana ny vokatra anticoagulant.
Fanafody miady amin'ny bakteria: ny fampiasana mitambatra dia mampihena ny fahombiazan'ity vokatra ity.
Cholestyramine: ampiarahina amin'ny cephalexin ao amin'ny tsinay, mampihena ny fitrohana ary mampihena ny fitanana ny rà, saingy tsy voakasik'izany ny fitrohana tanteraka.
Diuretika mahery: ny fampiasana mitambatra dia mampitombo ny nephrotoxicity.
Mifanaraka amin'ireto fanafody manaraka ireto: terramycin hydrochloride, aureomycine hydrochloride, tetracycline hydrochloride, colistin sulfate; polymyxine E, erythromycine lactobionate, lincomycin, sulfaoxazole, Calcium chloride, sns.
Ireo soavaly mampiasa ceftiofur ao anatin'ny toedain'ny fihenjanana dia mora voan'ny fivalanana mahery vaika, izay mety hahafaty. Raha vantany vao miseho izany dia tokony hajanona avy hatrany ny fanafody ary tokony horaisina ny fitsaboana mifanaraka amin'izany.
Ny sodium Ceftiofur ho an'ny tsindrona dia tokony hampiasaina mifanaraka amin'ny fatra voatondro, ny lalam-pitsaboana ary ny làlan'ny fitantanana, ary tsy misy fe-potoam-panafody famonoana olona sy fotoana fako ronono.
Fotoana fisintonana: sodium Ceftiofur ho an'ny tsindrona, 3d ho an'ny omby, 2d ho an'ny kisoa; Ceftiofur amin'ny tsindrona, 1d ho an'ny kisoa.
Amin'ny alàlan'ny voa no tena amoahana azy, ary tokony ahitsy ny fatra ho an'ny biby tsy ampy amin'ny voa.
Alohan'ny hampiasana ny sodium ceftiofur amin'ny tsindrona dia alao anaty rano izy mba hanana 50 mg ceftiofur ny ML tsirairay (fiarovana amin'ny 2 ~ 8 ° C mandritra ny 7 andro ny fiarovana tsirairay ary fiarovana amin'ny 15 ~ 30 ° C mandritra ny 12 ora amin'ny hafanan'ny efitrano).
Ceftifur no taranaka fahatelo voafaritra manokana momba ny biby cephalosporine antibiotika. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fihanaky ny bakteria betsaka sy ny fiasan'ny bakteria mahery. Aorian'ny fitantanan-draharaha dia alaina haingana izy io, miaraka amin'ny bioavailability avo lenta, maharitra antsasaky ny fiainana ary fahombiazana maharitra. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny ceftiofur dia be mpampiasa amin'ny faritra veterinera.
An'i Ceftiofur laktama beta. ary BALLYA manome a fitsapana betalactam mba hilazana aminao raha misy ambina lactams beta amin'ny vokatra vita amin'ny ronono izayhaninao isan'andro.